Filtrer les éléments par date : samedi, 08 février 2020
samedi, 08 février 2020 23:21
Sambava: Manararaotra ny tsy fisian’ny « Police de la Route » ireo mpitaingina moto
Mitombo ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fifamoivoizina teto Sambava, toy ny hita amin’ireto sary nalaina androany ireto.
Tsy manao aroloha ny ankamaroan’ireo mpitondra moto. Ao anaty arabe ny olona no mandeha.
samedi, 08 février 2020 22:47
Andry Rajoelina: Any Addis-Abeba hanamafy ny toeran’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Any Addis-Abeba, renivohitr’i Etiopia, hatry ny tolakandro teo ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, mitarika ny delegasiona malagasy handray anjara amin’ny fihaonana an-tampony faha-33 ny Vondrona Afrikanina ny 9 sy 10 febroary 2020.
« Hanamafy ny toeran’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena no anton-dia», hoy ny filoha Rajolina, « mba hamiratra indray ny Tanindrazana ka tsy ho latsa-danja amin’ireo firenena Afrikanina hafa i Madagasikara ».
Hifarana amin’ity fihaonana an-tampony faha-33 ity ny fitondran’ny filoha Ejipsiana, Abdel Fattah al-Sissi, ny Vondrona Afrikanina.
samedi, 08 février 2020 22:45
Distrikan'i Mahabo: Mahatsiaro ho saziana noho ny safidiny ny Vahoaka
Fito volana tsy nahita izay solombavam-bahoakany ny Distrikan’i Mahabo, Faritra Menabe. Manomboka mametra-panontaniana ny Vahoaka aty an-toerana manoloana ny zava-misy.
Nentanina izahay hifidy izay olona mendrika sy afaka hitondra tenin'ny vahoakan’i Mahabo any amin’ny governemanta sy ny fanjakana foibe, ary hiady ny ho fampandrosoana ity Distrikanay ity, hoy ny olona sendra ny GasyPatriote.
Tonga nanefa ny adidy sy naneho ny safidy ny vahoaka ny 27 mey 2019, andro nanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka nanerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Namoaka vokatra ny CENI, nitarika vonjimaika ny kandida tsy miankina Raveloson Ludovic dit Leva. Nohamafisin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana io vokatra io, ary nambara fa voafidy ofisialy ho solombavam-bahoaka tato amin’ny Distrikan’i Mahabo i Raveloson Ludovic dit Leva, izay efa solombavam-bahoaka teo aloha tato ihany.
samedi, 08 février 2020 22:19
Volahaingo Marie Thérèse: Nangatahana ny hiverenany ao Tsimbazaza
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine, amin’ny hiverenan’i Volahaingo Marie Thérèse handray ny toerany ao Tsimbazaza. Voapetraka ny 7 febroary 2020 araka ny firaketan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana.
Solombavam-bahoaka voafidy tao Bealanana, avy amin’ny antoko Malagasy Miara-Miainga i Volahaingo Marie Thérèse, no voatendry ho Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa tao amin’ny governemanta Ntsay Christian.
Andriamanana Josoa Iarintsambatra Rijasoa no minisitra vaovao notendrena, ny 29 janoary 2020, nasolo toerana an’i Volahaingo Marie Thérèse.
samedi, 08 février 2020 22:11
Antenimieram-pirenana: Miandry ny didin’ny HCC ny hanoloana an’ny depioite Hasimpirenena sy Leva
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC), ny 6 febroary 2020, ny filohan’ny Antenimieram-pirenana Razanamahasoa Christine ny amin’ny hanondroana ireo izay hisolo an’i Rasolomampionona Hasimpirenena sy Raveloson Ludovic dit Leva.
Solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Fandriana, Faritra Amoron’i Mania i Rasolomampionona Hasimpirenena ; Solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tao Mahabo, Faritra Menabe tamin’ny fifidianana natao ny 27 mey 2019. Samy tsy mbola nandingana ny tokonan’ny Antenimieram-pirenana, samy tsy niatrika fivoriana na in-dray mandeha aza nandritra iny taona 2019 iny, satria samy voatazona am-ponja fotoana fohy taorian’ny naneken’ny CENI ny firotsa-kofidian’izy ireo.
Samy voafidy ara-demokratika na Rasolomampionona Hasimpirenena na Raveloson Ludovic dit Leva, nefa samy tsy nisy niatrika fampielezan-kevitra.
samedi, 08 février 2020 18:57
Soamahamanina: Zanaka tapia 3500 no novolena androany
Nifarimbona namboly hazo tao amin'ny Fokontany Mandrosoa, Kaominina Soamahamanina, Faritra Itasy, androany, ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny tetikasan’ny filoha-pirenena ary ny Faritra Itasy. Tanjona manokan'ny Ministera ny hamerina indray ny ala tapia izay mitahiry ny vakoka maha-malagasy.
Zana-kazo 6000 no novolena ka Zanaka tapia ny 3500 tamin’izany, nifarimbonana niaraka tamin’ny Fokonolona teny an-toerana.
Ny ala tapia no iveloman'ireo landy izay mampiavaka antsika Malagasy. Ao amin'ny Faritra Itasy sy Amoron'i Mania ihany no ahitana ala tapia sy ny landy eto Madagasikara.
Zana-kazo 100 000 no tanjon'ny ONG DEFI izay miaro ny tontolo iainana sy ny Ala tapia aty Itasy.
samedi, 08 février 2020 10:11
Malaimbandy: Tazomina am-ponja vonjimaika ny Ben’ny tanàna teo aloha
Fanenjehana taorian’ny fanadihadiana nataon’ny Bianco no nisamborana azy, ka nidirany am-ponja vonjimaika.
Ben’ny tanàna tsy miankina tao Malaimbandy, Distrikan’i Mahabo i Kassamaly Reza. Tsy nirotsaka hofidiana izy tamin’ny fifidianana natao ny 27 novambra 2019.
Tany Mandoto faritra Vakinankaratra izy no voasambotra, ary nalefa ao amin’ny fonjaben’i Morondava.
samedi, 08 février 2020 09:59
Coronavirus: Tafakatra 722 ny maty, tezitra ny Sinoa
Mihombo andro aman’alina ny loza aterak’ilay valanaretina coronavirus any Chine. Tafakatra 722 ireo namoy ainy hatramin’ity maraina ity.
Malahelo sady tezitra ny Sinoa taorian’ny nahafatesan’i Dr Li Wenliang, ilay dokotera maso niasa tao Wuhan, izay nanao fanairana voalohany amin’ny fisian’ity coronavirus ity sy ny zava-doza haterany tamin’ny desambra 2019.
Nosazian’ny fanjakana Sinoa i Dr Li Wenliang tamin’io fanehoan-keviny io. Ankehitriny, tsy vitan’ny hoe voaporofo ny nambarany fa tsy mety voafehy ity coronavirus ity, manampy trotraka izany ny tsy fahampian’ny fitaovana fiarovan-tena toy ny arovava ho fisorohana ny fiparitahan’ity valanaretina ity.
samedi, 08 février 2020 09:58
8 février: Journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains.
Le 8 février correspond aussi à la fête de Sainte Joséphine Bakhita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée puis rendue libre.